Tombony 5 ambony amin'ny fakana Phosphatidylserine (PS) -Manome lalana
Tombontsoa 5 amin'ny fahazoana Phosphatidylserine (PS)
Araka ny hevitray, ny Phosphatidylserine no fanampin-tsakafo tsara indrindra misy amin'izao fotoana izao eny an-tsena avy any Cofttek. Izahay dia manolotra ny antony hanohanana an'ity safidy ity. Voalohany, ity famenon-tsakafo ity dia manome ny sandam-bola faran'izay tsara - amin'ny ranomasina misy vokatra lafo indrindra, ity famenon-tsakafo Phosphatidylserine ity dia latsaka amin'ny lafiny takatry. Faharoa, ity famenon'i Cofttek ity dia natao tamina toerana iray nozahana ary noho izany, azo hatsapana ny kalitaony. Ny vokatra koa dia nosedraina noho ny fahadiovana ary koa ny tanjaka. Noho izany, raha mitady hividy fanampin-tsakafo Phosphatidylserine tsara ianao dia mifandraisa aminay cofttek.com.
Inona no atao hoe Phosphatidylserine (PS)?
Phosphatidylserine (PS) dia phospholipid ary fitambarana izay tena manakaiky ny fibres sakafo izay matetika hita ao amin'ny vatan'ny neural olombelona. Ny phosphatidylserine dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fiasan'ny fikolokoloana ary tena ilaina amin'ny fiasan-tsaina satria Phosphatidylserine dia manamora ny famindrana hafatra eo amin'ireo sela nerve.
Raha ny salan'isa, ny sakafo tandrefana dia mamatsy ho an'ny 130 mg ny Phosphatidylserine isan'andro. Ny trondro sy hena dia loharano tsara Phosphatidylserine, izay hita ihany koa amin'ny habetsaky ny vokatra sy legioma. Soy lecithin dia loharano tsara iray hafa an'ny Phosphatidylserine. Na izany aza, na dia ny Phosphatidylserine aza dia azo aseho avy amin'ny vatana ary koa amin'ny alàlan'ny sakafo amin'ny alàlan'ny loharano voajanahary, ny fikarohana vonjimaika dia mampiseho fa mihena ny haavony miaraka amin'ny fahanterana. Araka izany, amin'izao andro izao, ny fampidirana Phosphatidylserine dia hampiroborobo, indrindra amin'ireo zokiolona mirakitra ny fihenan'ny fahatsiarovana sy ny fiasan'ny fahatsiarovan-tena.
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, ny fangatahana fanampin-tsakafo Phosphatidylserine dia nitombo hatramin'ny nanombohana ny fanampiana Phosphatidylserine ho fanafody voajanahary ho an'ny toe-javatra isan-karazany, toy ny tebiteby, Alzheimer, aretin-tsaina hyperactivity, fahaketrahana, adin-tsaina ary sclérose maro. Manasaraka izany, ny fanampin-tsakafo Phosphatidylserine dia fantatra ihany koa hanatsarana ny vokatra ara-batana, ny fanatanjahan-tena, ny toe-po ary ny torimaso.
Amin'ity lahatsoratra ity, ankoatry ny famelabelarana ireo fiasa lehibe maro sy ny tombontsoan'ny Phosphatidylserine, dia handevina lalina kokoa isika hampahafantarana ny fio-tsakafo Phosphatidylserine tsara indrindra izay misy eo an-tsena amin'izao fotoana izao.
Inona no mahasoa ny phosphatidylserine?
Phosphatidylserine dia zavatra matavy antsoina hoe phospholipid. Mandrakotra sy miaro ireo sela ao amin'ny atidohanao io ary mitondra hafatra eo anelanelan'izy ireo. Ny Phosphatidylserine dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fitazonana ny sainao sy ny fahatsiarovana anao. Ny fandinihana biby dia milaza fa mihena ny haavon'io singa io ao amin'ny atidoha.
Tena miasa ve ny phosphatidylserine?
Ny fihinanana phosphatidylserine dia afaka manatsara ny soritr'aretin'ny aretin'i Alzheimer aorian'ny fitsaboana 6-12 herinandro. Toa mahomby indrindra amin'ny olona manana soritr'aretina tsy dia mafy loatra. Na izany aza, ny phosphatidylserine dia mety hahavery ny fahombiazany amin'ny fampiasana lava.
Moa ve ny phosphatidylserine mampatory anao?
Ny phosphatidylserine dia famenon-tsakafo fosfolipid izay mampiato ny famokarana kortisol amin'ny vatana, mamela ny haavon'ny kortisol avo lenta hampihena, ary vokatr'izany, torimaso mampitony kokoa.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny phosphatidylserine?
Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo tombontsoa lehibe amin'ny Phosphatidylserine (PS):
① Safidy fitsaboana mahomby amin'ny fanoherana ny kognitifa sy ny fihenan-tsofina
Ny fikarohana voalohany natao tamin'ny biby dia nanambara fa ny fanampiana maharitra ny Phosphatidylserine dia mampihena ny tahan'ny fihenan'ny kognita na ny famadihana azy tanteraka amin'ny voalavo. Taorinan'ireto fehin-kevitra tsara ireto dia natao ny fanadihadiana mba hamakafaka ny vokatry ny fihinanana Phosphatidylserine amin'ny olombelona ary ny fandalinana maro dia nanaporofo ny fisian'ny famenon-tsiranoka 200 mg an'ny Phosphatidylserine ho an'ireo mararin'ny Alzheimer dia mampitombo ny haavon'ny dopamine sy serotonin, ireo hormonina roa izay mirakitra fihenan'ny fihenan-danja raha tsy izany. noho ny toe-javatra. Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny Phosphatidylserine koa dia manao asa lehibe amin'ny fitehirizana ny metabolisma glucose, izay manome koa ny fanamaivanana ny aretina. (2) Pubmed: Phosphatidylserine sy ny ati-dohan'olombelona
② Izy io dia ampiasaina matetika amin'ny vokany Nootropic
Ny fametrahana ny Phosphatidylserine dia matetika nomanina amin'ny antitra mba hanatsarana ny fifantohany ary koa ny fihenan'ny fahaiza-misaina. Ny fikarohana voalohany izay nandinika ny fiantraikan'ny Phosphatidylserine amin'ny fiadidiana ny olona efa zokiolona manana fahasimbana ara-tsaina tsy pathological dia mampifandray ny fampidirana Phosphatidylserine 300mg soy telo andro mandritra ny telo volana miaraka amin'ny fahatsiarovan-jery maso. Na izany aza ny fandinihana iray hafa dia nanombatombana ny vokatry ny menaka trondro Phosphatidylserine ary nahatsikaritra fa ny fampidirana Phosphatidylserine dia nanatsara ny hetsika fampahatsiahivana avy hatrany amin'ny olona taloha hatramin'ny 42%. Noho izany, ny Phosphatidylserine dia azo antoka fa misy fiantraikany nootropic amin'ny vatana. Na izany aza, ny fikarohana momba ny fahombiazan'ny Phosphatidylserine nalaina avy amin'ny zavamaniry mba hisorohana ny fahaverezan'ny fahatsiarovana mifandraika amin'ny taona dia voafetra ary ilaina kokoa ny asa ilaina amin'ity faritra ity.
③ Ny tsimok'aretina phosphatidylserine dia ampifandraisina amin'ny fampisehoana fanatanjahantena mihombo
Ny tatitra iray navoaka tao amin'ny Sports Medicine dia nanambara fa misy porofo ampy hanaporofoana fa ny famenon-tsakafo Phosphatidylserine dia mifandray amin'ny fanatsarana ny atletisma sy ny fahaizany manao fanatanjahan-tena. Ny fandinihana dia nanambara ihany koa fa ny famenon-tsakafo Phosphatidylserine mahazatra dia mampihena ny fanaintainan'ny hozatra ary koa ny risika mahazo ny olona iray. Toy izany koa, fanadihadiana iray hafa dia nanambara fa ny famenon-tsakafo Phosfatidylserine mandritra ny enina herinandro dia nanatsara ny fomba nitaoman'ny mpilalao golf sy ny fampifangaroana ny Phosphatidylserine amin'ny kafeina sy vitamina mampihena ny fahatsapana havizanana aorian'ny fampiharana. Na izany aza, tsy maintsy tadidina fa tsy dia voamarika loatra ireo fanatsarana ireo.
④ Manampy amin'ny ady amin'ny famoizam-po ny phosphatidylserine
Tamin'ny 2015, fanadihadiana iray navoaka tao amin'ny Mental Illness dia nanambara fa amin'ny olona 65 taona no ho miakatra, ny fihinanana Phosphatidylserine mahazatra, DHA ary EPA dia mety hampihena ny fahaketrahana. Toy izany koa, fanadihadiana iray hafa dia nanambara fa ny famenon-tsakafo Phosphatidylserine dia mampiroborobo ny fahatsapana fahafaham-po sy fahasambarana aorian'ny fotoam-panatanjahantena amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ny kortisol entin'ny adin-tsaina, izany hoe ny hormonina miady saina.
⑤ Azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ADHD amin'ny ankizy izy io
Ny fandinihana natao tamin'ny taona 2012 dia nandalina ny vokatry ny Phosphatidylserine ho an'ireo ankizy manana ADHD na fanelingelenana ny fahasimban'ny atahorana. Ankizy 200 miaraka amin'ny ADHD no nandray anjara tamin'ny fandinihana, izay namarana fa ny fikarakarana ny 15 herinandro amin'ny fampiasana Phosphatidylserine miaraka amin'ny asidra matavy omega-3 dia mandaitra amin'ny fitsaboana ADHD. Ny ankizy nanome an'ity fitambaran-dàlana ity dia nisoratra anarana mihena ny fihetsiky ny hipetraky ny hery mihetsika mahery vaika na mamporisika sy ny toe-tsaina mihatsara. Tamin'ny taona 2014, nisy fanadihadiana iray hafa natao natao hamakafakana ny phosphatidylserine amin'ny plasebo in 36 ny zaza mijaly amin'ny ADHA roa volana. Tamin'ny faran'ny fandinihana, ny vondrona fitsaboana dia naneho fitadidiana tsara sy fitandremana.
Ankoatry ny tombontsoa voalaza etsy ambony, ny fametrahana ny Phosphatidylserine dia mifamatotra ihany koa miaraka amin'ny fikojakozan'ny fihatsarana anaerobic izay mihatsara, mihena ny havizanana ary ny fanamboarana tsara kokoa sy ny hafainganana.
Inona ny firafitry ny phosphatidylserine?
Phosphatidylserine dia phospholipid - glycerophospholipid manokana - izay misy asidra matavy roa mifatotra amin'ny fifandraisan'ny ester amin'ny karbaona voalohany sy faharoa an'ny glycerol ary serine mifamatotra amin'ny fifamatorana phosphodiester amin'ny karbaona fahatelo an'ny glycerol.
Maninona isika no mila Phosphatidylserine (PS)?
Andro vitsy, ny atidohantsika dia mahatsapa ho toy ny efa voahitsakitsaka ary tsy afaka manao asa hafa. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia mitranga izany noho ny fihenan'ny fiasan-tsaina, fanjakana mahazatra ny be antitra fa tsy dia fahita firy amin'ny tanora lehibe. Nandritra izay taona vitsy lasa izay, ny mpahay siansa sy ny mpikaroka dia naneho fahatokisan-tena lehibe tamin'ny fahaizan'i Phosphatidylserine hikarakara ny fihenan'ny kognitika. Ny tena zava-dehibe dia ny fikarohana tsy mitsaha-mitombo ao amin'io faritra io dia nampiharihary ny olona ny tombontsoa hafa azo avy amin'ny Phosphatidylserine, toy ny fahaizany mitsabo ny toe-javatra, toy ny aretin'i Alzheimer sy ADHD ary koa ny fahaizany mampitombo ny torimaso sy manatsara ny toe-po.
Alohan'ny hidirantsika amin'ny antsipiriany momba izay ataon'ny Phosphatidylserine ho an'ny vatan'olombelona, ​​dia aleo aloha fantarina izay atao hoe Phosphatidylserine (PS).
Inona avy ireo fampiasana Phosphatidylserine (PS)?
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, ny fangatahana fanampin-tsakafo Phosphatidylserine dia nitombo tokoa noho ny fampiasana maro ny Phosphatidylserine (PS). Ho an'ny vao manomboka, Phosphatidylserine dia mandaitra tokoa amin'ny fanatsarana ny fiasan'ny kognita sy ny fihenan'ny fihenan'ny kognita. Toy izany koa, noporofoina fa mahomby amin'ny ADHD amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe ary mandaitra tsara ny fihenjanana vokatry ny fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny fampihenana ny haavon'ny kortisol ao anatin'ny vatana. Fantatra ihany koa ny fanatsarana ny sain'ny olona iray, ny fitadidiany miasa ary ny fivoahan'ny fanatanjahan-tena. Noho ireo antony rehetra ireo sy ny maro hafa, ny fangatahana fanampin-tsakafo Phosphatidylserine dia nitombo nandritra ny taona vitsivitsy.
Firy ny phospatidylserine tokony horaisiko amin'ny fampidinana ny kortisol?
Ny fatra marina an'ny Phosphatidylserine (PS) miankina amin'ny tombony ahazoana azy. Ny marimaritra iraisana iraisana dia ny fatra mahazatra 100 mg, alaina intelo isan'andro, ka mahatratra 300 mg isan'andro, dia azo antoka sy mandaitra manoloana ny fihenan'ny kognita. Etsy ankilany, rehefa ampiasaina hanasitranana ADHD ny Phosphatidylserine, ny fatra mahazatra 200 mg isan'andro dia heverina ho tsara ho an'ny ankizy ary 400 mg isan'andro dia heverina ho tsara ho an'ny olon-dehibe. Ho an'ny Alzheimer, ny fatra 300-400 mg dia heverina fa ilaina. Raha toa ka ampiasaina hanatsarana ny vokatra fanatanjahan-tena ny fanampin-tsakafo Phosphatidylserine dia angatahina ny mpampiasa tsy hihoatra ny fatran'ny fatrany 300 mg isan'andro.
Ahoana no hampihenanao ny haavon'ny kortisol?
Azonao atao ny mandray ny famenon'ny PS isan'andro mandritra ny 10 andro valiny kortisol mivadika alohan'ny sy mandritra ny adin-tsaina entin'ny fanatanjahan-tena.
Inona no atao hoe kortisol amin'ny vatanao?
Cortisol dia hormonina steroid izay mandrindra dingana maro manerana ny vatana, ao anatin'izany ny metabolisma sy ny valin'ny hery fiarovana. Izy io koa dia manana andraikitra lehibe indrindra amin'ny fanampiana ny vatana hamaly ny adin-tsaina.
Ohatrinona ny phosphatidylserine amin'ny lecithin soja?
Ny singa lehibe amin'ny lecithin azo avy amin'ny soja dia: 33-35% menaka soja. 20–21% Phosphatidylinositols. 19–21% Phosphatidylcholine.
Ny phosphatidylserine dia hita ao amin'ny lecithin soja tokony ho 3% amin'ny phosfolipida total.
Rahoviana no tokony hihinana phosphatidylserine ianao?
Ny phosphatidylserine dia miasa amin'ny dingana voalohany, raha avo ny haavon'ny kortisol. Tena tsara raisina izany raha ny haavon'ny kortisol no avo indrindra. Ohatra, mifoha amin'ny toedan'ny adin-tsaina ve ianao noho ny fanerena asa? Raiso amin'ny maraina mba hisorohana ny fitaintainanana sy ny fitomboan'ny adin-tsaina.
Tokony horaisina amin'ny alina ve ny phosphatidylserine?
Phosphatidylserine (PS 100; makà iray hatramin'ny roa amin'ny fotoana hatoriana). Ny phosphatidylserine dia famenon-tsakafo fosfolipid izay mampiato ny famokarana kortisol amin'ny vatana, mamela ny haavon'ny kortisol avo lenta hampihena, ary vokatr'izany, torimaso mampitony kokoa.
Maharitra hafiriana vao manomboka miasa ny phosphatidylserine?
Ny fihinanana phosphatidylserine dia afaka manatsara ny soritr'aretin'ny aretina Alzheimer aorian'ny fitsaboana 6-12 herinandro. Toa miasa tsara indrindra amin'ny olona manana soritr'aretina tsy dia mafy loatra izany.
Inona avy ireo voka-dratsin'ny phosphatidylserine?
Ny phosphatidylserine dia mety miteraka voka-dratsy toy ny tsy fahitan-tory sy ny vavonin'ny vavony, indrindra amin'ny fatra mihoatra ny 300 mg. Misy ny ahiahy fa ny vokatra namboarina tamin'ny loharanom-biby dia mety hamindra aretina, toy ny aretin'omby adala.
Inona no mahasamihafa ny serine L sy ny phosphatidylserine?
L-serine dia asidra amine tena ilaina amin'ny fampifangaroana ny phosphatidylserine, izay singa iray amin'ny membrane selan'ny ati-doha (ie, neurons). Azo vokarina ao amin'ny vatana, ao anatin'izany ny ati-doha, fa ny famatsiana ivelany avy amin'ny sakafo dia ilaina amin'ny fitazonana ireo ambaratonga ilaina.
Inona no mahatonga ny tsy fahampian'ny serine?
Ny tsy fahampian'ny serine dia vokatry ny tsy fahatomombanana amin'ny iray amin'ireo anzima synthesising telo an'ny l-serine biosynthesis pathway.
Inona no ataon'ny L Tyrosine ho an'ny vatana?
Mety ho hitanao ny tyrosine amidy amin'ny endrika famenony miaraka na tsy misy ny "L." Ny tiryrine dia misy amin'ny sela rehetra amin'ny vatan'olombelona sy amin'ny ankamaroan'ny tsiranoka ao aminy. Manampy ny vatana hamokatra anzima, hormonina tiroida ary ny melanine pigmentan'ny hoditra izany. Izy io koa dia manampy ny vatana hamokatra neurotransmitter izay manampy ny sela nerveo hifampiresaka.
Inona no fiasan'ny serine?
Serine dia asidra amine polar izay mitana andraikitra lehibe amin'ny metabolisma ny zavamaniry, ny fivoaran'ny zavamaniry ary ny famantarana ny sela. Ankoatry ny maha-vato manorina proteinina azy, i Serine dia mandray anjara amin'ny biosynthesis an'ny biomolecules toy ny asidra amino, ny nucleotides, ny phospholipids, ary ny sphingolipids.
Inona no sakafo avo ao amin'ny phosphatidylserine?
Azonao atao ny mampitombo ny fihinanana phosphatidylserine anao na dia sakafo aza - misy amin'ny sakafo maromaro izy io, ao anatin'izany ny soja (izay loharano lehibe), tsaramaso fotsy, atody atody, atin'ny akoho ary atin'ny hen'omby.
Inona avy ireo tombontsoa ara-pahasalamana avy amin'ny phosphatidylserine?
Ny vitamina, mineraly ary micronutrients ao amin'ny phosphatidylserine dia manome tombony lehibe amin'ny fahasalamana. Phosphatidylserine dia fantatra ho toy ny antioxidant, manampy amin'ny fampihenana ny vokatry ny radika afaka mampidi-doza amin'ny vatanao. Izany dia afaka manampy amin'ny fihenan'ny risika anao amin'ny fitrangan'ny aretina toy ny diabeta sy homamiadana.
Ahoana ny fiasan'ny phosphatidylserine ho mariky ny apoptosis?
Ny scramblases phospholipid olombelona (hPLSCRs) dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fizotran'ny sela lehibe. hPLSCR1 dia miteraka apoptosis avy amin'ny phagnatidylserine fihanaky ny phagositosis apetraka. Ny hPLSCR3 dia manelanelana ny fihanaky ny kardiolipin apoptosis amin'ny mitochondria.
Asidra amine ve ny phosphatidylserine?
L-serine dia asidra amine tena ilaina amin'ny fampifangaroana ny phosphatidylserine, izay singa iray amin'ny membrane selan'ny ati-doha (ie, neurons). Azo vokarina ao amin'ny vatana, ao anatin'izany ny ati-doha, fa ny famatsiana ivelany avy amin'ny sakafo dia ilaina amin'ny fitazonana ireo ambaratonga ilaina
Inona no andraikitra lehibe ananan'ny Phosphatidylethanolamine?
Phosphatidylethanolamine dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanangonana lactose permease sy proteinina membrane hafa. Izy io dia miasa toy ny 'chaperone' hanampiana ny proteinina membrane mamoritra tsara ireo rafitry ny tertiary mba hahafahan'izy ireo miasa tsara.
Afaka manana choline be loatra ve ianao?
Ny fahazoana kôlôly be loatra dia mety hiteraka fofona amam-bolo, mandoa, tsemboka sy rora mavesatra, tosidra ambany, ary fahasimban'ny aty. Ny fikarohana sasany dia milaza ihany koa fa ny kôlôly betsaka dia mety hampitombo ny risika amin'ny aretim-po.
Ny phosphatidylserine dia lipida ve?
Phosphatidylserine (PtdSer), singa iray tena ilaina amin'ny fonon'ny eukaryotic, no phospholipid anionika be indrindra ao amin'ny sela eukaryotic izay mahatratra hatramin'ny 10% amin'ny lipida totalin'ny sela. Ny ankamaroan'ny zavatra fantatra momba ny PtdSer dia ny anjara andraikitra exofacial PtdSer amin'ny apoptosis sy ny fampidiran-dra.
Inona no ampiasaina amin'ny phosphatidylcholine?
Ny phosphatidylcholine koa dia ampiasaina amin'ny fitsaboana hépatite, eczema, aretin'ny gallbladder, olana amin'ny fivezivezena, kolesterola avo, ary syndrome prédenstrual (PMS); amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny dialyma voa; amin'ny fanamafisana ny hery fiarovan'ny vatana; ary ho fisorohana ny fahanterana.
Ny phosphatidylserine ve dia zwitterionic?
Ny proteinina toy izany dia mamatotra fosfolipida miiba (cardiolipin, phosphatidylglycerol, phosphatidylserine, phosphatidylinositol) fa tsy zwitterionic na tsy mitongilana phospolipids (phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine).
Mitovy amin'ny phosphatidylcholine ve ny phosphatidylserine?
Ny phospholipids phosphatidylserine (PS) sy phosphatidylcholine no akora faharoa ankasitrahana indrindra ho an'ny olon-dehibe antitra miaraka amin'ny fitarainan'ny fahatsiarovana avy amin'ny tompon'ny famenon-tsakafo.
Mampihena ny kolesterola ve ny phosphatidylcholine?
Ny phosphatidylcholine am-bava polyunsaturated oral dia mampihena ny atin'ny lipidia sy ny kolesterola ao amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo salama.
Ny phosphatidylserine ve manampy amin'ny fihenan'ny lanja?
Raha fintinina, ny phosphatidylserine dia manampy amin'ny fihenan'ny lanjany amin'ny fifehezana ny haavon'ny kortisol. Ity ny fomba fiasan'izy io: ho valin'ny fihenjanana, ny fihary adrenal dia mamokatra hormonina antsoina hoe kortisol. Miditra haingana ao amin'ny lalan-drà izy ary mamela anao hiatrika tsara kokoa ny fanentanana ivelany.
Azo antoka ve ny phosphatidylserine (PS)?
Ny fikarohana natao hatreto dia manambara fa ny Phosphatidylserine dia mahazaka tsara ny vatana ary rehefa nalaina am-bava dia azo antoka ny mihinana Phosphatidylserine mandritry ny 3 volana miaraka amin'ny fatra isan'andro tsy mihoatra ny 300 mg isan'andro. Afaka mihinana an'ireto fanampin-tsakafo ireto ny ankizy hatramin'ny 4 volana. Na izany aza, ny fatra isan'andro mihoatra ny 300 mg isan'andro dia mety hiteraka voka-dratsy toy ny tsy fahitan-tory sy ny vavony. Ireo vehivavy bevohoka sy mpampinono dia tsy maintsy manalavitra ireo fanampin-tsakafo Phosphatidylserine satria tsy ampy ny porofo manamarina fa azo antoka ho an'ireto vondrona ireto ireo fanampiana ireo.
Betsaka ny olona maniry ny fofom-borona Phosphatidylserine miorina amin'ny zavamaniry satria inoana fa ny famatsiana biby dia mamelona ny mpampiasa ny aretina mifandraika amin'ny biby. Na izany aza, tsy mbola nisy fikarohana fikarohana nahita porofo mivaingana hanohanana io hevitra io.
Aiza no hividianana vovoka Phosphatidylserine (PS)?
Na orinasa mpamokatra famenon-tsakafo Phosphatidylserine ianao na olona te-hividy vovoka Phosphatidylserine (PS) betsaka ho an'ny tanjona hafa, ny toerana tsara indrindra hiantsenana dia cofttek.com.
Cofttek dia mpamokatra fitaovana manta famenony izay efa eny an-tsena hatramin'ny taona 2008. Ny orinasa dia manolo-tena hamokatra vokatra avo lenta ary manana ekipa mpikaroka mahay sy za-draharaha izay miasa amin'ny famantaranandro mba hahazoana antoka fa mahazo ny tsara indrindra ny mpividy vokatra tsara noho ny volany. Cofttek dia efa manana mpanjifa sy mpanjifa amin'ny faritra maro any India, Shina, Eoropa ary Amerika Avaratra. Izy io koa dia manana ekipa mpivarotra voatokana izay miantoka ny mpanjifan'ny orinasa rehetra mivadika mpanjifa faly. Ny vovo-dronono Phosphatidylserine atolotry Cofttek dia tonga amina andiany 25 kilao ary azo atokisana an-jambany noho ny kalitao sy ny fahamendrehana. Raha izany, raha mitady mividy vovo-tsiranoka Phosphatidylserine (PS) amin'ny ankapobeny, aza miantsena amin'ny toeran-kafa fa any Cofttek.
(2) Pubmed: Phosphatidylserine sy ny ati-dohan'olombelona
(3) Ny vokatry ny famenonan'ny phosphatidylserine amin'ny fanatanjahan-tena olombelona
(4) Ny lecithin phosphatidylserine sy ny asidra phosphatidic acid (PAS) dia mampihena ny soritr'aretin'ny prémagntrual syndrome (PMS): Vokatry ny fizahan-toetra, fifehezana placebo, fitsapana klinika jamba indroa
(5) Sciencingirect: Phosphatidylserine
(13) Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).